I-Suite kunye noNgeno lwaBucala — Ikhitshi—Ibhedi yaseKing - I-Airbnb
I-Suite kunye noNgeno lwaBucala — Ikhitshi—Ibhedi yaseKing
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGreg And Jutta
Esi sithuba se-1100 ft2 ibiyiprojekthi yethu yokuhlaziya impelaveki iminyaka emi-5.
Songeze imigangatho ye-hickory hardwood kwigumbi lokulala kunye nendawo ephambili kunye nemigangatho yeethayile ekhitshini nakwigumbi lokuhlambela. Oku kulula kakhulu ukuyigcina icocekile kwaye ingenayo i-allergen.
Kukho itafile enkulu yokutyela yamaplanga kunye netafile efanayo kwigumbi lokulala ledesika ebanzi.
Igumbi lokuhlambela lenziwe imodeli yeehotele ezitofotofo zaseYurophu. Eli gumbi lokuhlambela linokukhanya okwaneleyo, izibuko kunye neetawuli ezixubileyo ezinokufudunyezwa phambi kokuhlamba kwii-racks ezifudumalayo.
Songeze ikhabethe elibanzi elinezibane ze-LED kwishelufu nganye ukuze ungalibali ukuphinda upakishe eso sihlangu simnyama esinokuthi siwele ngasemva kwekhabhathi.
Songeze ikhitshi elinethayile elineekhabhathi ezintsha kunye nomphezulu we-granite counter enezitulo kunye nentsimbi engenasici.
Ubumelwane bukwicandelo elizolileyo kakhulu kodwa lifikelela ehlathini. Kukho iindlela ezinqumla ehlathini ebeziya kuba ziindlela ezizayo ukuba ukwahlulwa kwandiswa. Akukho zitrato. I-traffic ehla ngendlela ngumntu ohlala kwi-subdivision. Kukho iimbaleki eziqhuba isiphaluka sengingqi, emalunga neekhilomitha ezi-1.5, kuba kukho iimoto ezimbalwa kunye neenduli ezincinci.
Amaxhama kunye neeturkeys zijikeleza ngokuhlwa. Sisoloko sitshayela ‘inkunkuma’ emacaleni ethu.
Indawo ibekwe kufutshane nedolophu yaseShelby kunye:
*Isibhedlele seMpilo ye-Atrium - iikhilomitha ezili-1.5
*Uptown Shelby-2.6 yeemayile
*Igqabi elijikelezayo kwiSidiliya - iimayile eziyi-0.6
*Iziko laMahashi laMazwe ngaMazwe eTryon - iimayile ezingama-40
*Isikhululo seenqwelomoya iCLT - iimayile ezingama-40 (imizuzu engama-52) kunye netrafikhi enzima kwelinye icala leHwy 85
Umbuki zindwendwe ngu- Greg And Jutta
Entwasahlobo nasehlotyeni sihlala kwidesika kwaye sinandipha ukuhlwa. Siziva uninzi lweendwendwe zethu zifuna nje ukuba nexesha lazo, kodwa singathanda ukuba nenkampani kwidekhi kwaye sikwazi ngcono. Sikuyekela kuwe.